Bashaqekile uNgcobo weSwallows esala ngaphandle kwiBafana - Impempe
Bashaqekile uNgcobo weSwallows esala ngaphandle kwiBafana
UNjabulo Ngcobo weSwallows FC
Izibuza iyaziphendula imenenja kaNjabulo Ngcobo weSwallows FC ukuthi lo mdlali usale kanjani ngaphandle ngesikhathi kuqokwa abadlali azomela izwe kwiBafana Bafana emidlaweni yokuhlunga yeCAF Africa Cup of Nations (Afcon) ngasekupheleni kukaMashi.
IBafana inemidlalo emibili emqoka la izobhekana khona neGhana ngoMashi 25 neSudan ngoMashi 28, okufanele nakanjani iyinqobe ukuze ingene kwi-Afcon.
UNgcobo ngomunye wabadlali abebebhekiwe ukuthi uMolefi Ntseki, umqeqeshi weBafana, uzobabiza uma esehlanganisa isikwati sakhe ngoLwesine, kodwa kwangezeka.
Lesi sitobha esineminyaka engu-27 siyibambe ngendlela encomekayo kwiDube Birds selokhu kuqale isizini futhi sinconywa ngapha nangapha osekwenze namaqembu amakhulu kuleli afise ukusisayina.
“Siphatheke kabuhlungu. Sishaqekile ngoba besilindele ukuthi uzobizwa,” kusho imenenja kaNgcobo, uSboniso “King” Ngubane, owengeze ngokuthi uNgcobo wenza okungaphezulu kobekulindelwe kuye.
“Ngingasho nje ngingananazi ukuthi kusukela isizini iqala ukudlala kwakhe kube kuhle kakhulu, kudlulile kwebesikubhekile.
“Izinga lakhe belimfanele ukuba abizwe kwiBafana, lokho ngikusho ngoba abafana abanjengo(Rushine) De Reuck no(Lindokuhle) Mkhwanazi isizini eyiabavumanga kahle, bathole amaqembu amasha isikhathi sesihambile.
“Indlela adlale ngayo ingenze ngabona esethubeni elihle lokuthi angabizwa. Yingakho ngishaqekile ukuthi angabizwa,” kuchaza uNgubane.
Uthe usekhulumile nalo mdlali wakhe, emnxenxa ukuba angadikilbali ngokuzitshwa kwakhe nguNtseki kepha akuthathe njengenselelo yokuthi kumele aqhubeke azikhandle.
“Kungumsebenzi wethu ukuthi umfana ahlale esesimweni esihle ngakho ngikhulumile naye ngamtshela ukuthi ithuba lisekhona, iminyaka isamvumela, usazodlala kwiBafana.
“Akaziphakamisi, usengumfana ozithobile, oziphethe kahle futhi njengoba abantu behlezi bemncoma ukudlala kahle, lokho kumenza ukuthi afune ukuyenza kakhulu lento enhle ayenzayo,” kusho uNgubane.
UNgcobo akuyena yedwa umdlali ozitshiwe kwiBafana kade kubhekwe ukuthi uzobizwa. Abantu abaningi basale benganelisekile nangokungabizwa kukaMduduzi Mdantsane weCape Town City nonozinti weLamontville Golden Arrows, uSfiso Mlungwana ukubala nje abambalwa.
Previous Previous post: Useshoda “ngobudlova” emdlalweni wakhe uDlamini wePirates, kusho umqeqeshi
Next Next post: IStellies iwine owomkhaya weligi obuvutha bhe eKapa